छवि र शिल्पाको ठाकठुक, यस्तो छ कारण « Ramailo छ
छवि र शिल्पाको ठाकठुक, यस्तो छ कारण
प्रकाशित मिति : Feb 20, 2018
समय : 11:25 am
छविराज प्रोडक्सनले बनाएको पछिल्लो फिल्म ‘मंगलम’ यही फागुन २५ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । तर यतिबेला मिडियामा भने निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलबिच ‘ठाकठुक’ परेको खबर बाहिरिएको छ । खबर अनुसार छवि र शिल्पाले एकै फ्रेममा मिडियामा ‘ईन्टरभ्यु’ दिन ईन्कार गरिरहेका छन् । किन त ?
‘खाली एउटै कुरा आउँछ, अनि किन दिनु त सँगै ?’ शिल्पाले उल्टै प्रश्न गरिन्, ‘अब त बिहेको कुरा धेरै भैसक्यो ।’ खासमा निर्माता छविराज ओझासँगको बिहेको प्रश्नले शिल्पा हैरानीमा परेकी रहिछन् । यता निर्माता ओझापनि यही प्रश्नले गर्दा मिडियालाई ‘ईन्टरभ्यु’ दिन ईन्कार गरेको स्विकार गर्छन् । ‘अब त कत्ति बिहेको कुरा गर्नु ? ‘मंगलम’ को कुरा गरौं’, छविराज भन्छन् । शिल्पा, पुष्प र पृथ्वीसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
उसो त जब शिल्पाले छविराज प्रोडक्सनको ‘लज्जा’ खेलिन्, त्यतिबेला देखि नै उनीहरुको बिहेको चर्चा चलेको थियो । ‘मंगलम’ की निर्मात्री समेत रहेकी शिल्पाले छविसँग बिहे समेत गरिसकेको चर्चा छ तर, उनीहरुले स्विकार गर्दैनन् । नवल नेपाल निर्देशित ‘मंगलम’ मा शिल्पासँगै नायक पुष्प खड्का र पृश्वी प्रसाईंको मुख्य भूमिका छ ।